Soomaaliya oo dacwad ka gudbineysa Kenya & Xiisad cusub – XAMAR POST
Soomaaliya oo dacwad ka gudbineysa Kenya & Xiisad cusub
Xukuumada Soomaaliya ayaa ku eedeysay dhigeeda Kenya inay duqeymo ka fulisay deegaanada Ceel Cadde iyo Hisa-u-gur ee hoostaga Gobolka Gedo, iyadoo ku tilmaamtay in duqeyntaas aheyd mid aan loo meel dayin, waxaana dowladda Soomaaliya ku hanjabtay inay dacwad u gudbin doonto Midowga Afrika oo ku aadan arintaasi.
Duqeyntii Khamiistii Kenya ka fulisay deegaanadaas ayaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac oo ka soo gaaray hooyo iyo carruurteeda.
Qoraal Afka ingiriiska ku qornaa oo xalay kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibada Soomaaliya ayaa lagu yiri;”Waa tusaalihii ugu dambeeyay ee hawlgallada Ciidanka Difaaca Kenya (KDF) ee keenay dhimashada iyo naafaynta dad rayid ah, oo ay ku jiraan haween iyo carruurta oo si isa soo taraysa u noqdaya astaan ​​aan fiicnayn oo ah hannaanka hawlgalka ee ciidamada cirka Kenya”
Dowlada Soomaaliya ayaa ku tilmaantay howlgalada ciidamada Kenya ee gudaha dalka Soomaaliya inay yihiin kuwo ka baxsan waajibaadkooda hoos yimaada waajibaadka UNSC ee amarka AMISOM, gaar ahaan OP17 oo hoosta ka xarriiqaya muhiimadda ay leedahay in ciidamada AMISOM ay gutaan waajibaadkooda.
Iyagoo si buuxda ugu hoggaansamaya dowladaha ka qayb qaadanaya. waajibaadka saaran sharciga caalamiga ah, oo ay ku jiraan ilaalinta dadka rayidka ah, gaar ahaan haweenka iyo carruurta.
Axmed Madoobe oo baaq udiray Taliska AMISOM ee jooga Jubbaland
Ayax kusoo wajahan Soomaaliya oo digniin culus laga bixinayo